Maalinta Khudrada Adduunka Adduunka 2020: Suuqa Cuntada Hemp wuxuu helaa Caan ka sii badan • Daroogooyinka Inc.eu
Maalinta Khudradda Adduunka Adduunka 2020: Suuqa cunnada ee hemp heesaha ayaa caan ku ah
Toddobaadkan dhammaadkiisa waa Maalinta Khudradda Adduunka (1da Nofeembar) oo la mid ah veganism, suuqa cunnada hemp waa mid ka mid ah isbadalada caafimaad ee ugu cusub uguna soo kordhaya suuqa caafimaadka iyo caafimaadka.
1 Cunnooyinka Hemp: 6 Faa'iidooyin La Heshay Oo Ah iniin hemp
2 Suuqa cunnooyinka cuncunka adduunka ayaa ku soo kordha ku dhowaad 12% inta lagu jiro cudurka faafa ee COVID-19
3 Baahida loo qabo cuntooyinka dabiiciga ah ee ku salaysan hemp waxay noqon doontaa isbeddel weyn
Op xagasha Alaabada cuntada salka ku haysa waxay noqdeen kuwa caan ku ah dheef-shiid kiimikaad fudud oo ay ugu wacan tahay inay ka xor yihiin gluten, xasaasiyado, nooleyaal hidde-ahaan loo beddelay (GMO), laktoos, phytoestrogen iyo sunta cayayaanka.
Hemp waa isha wanaagsan ee laga helo faybar iyo fiitamiinno iyo macdano, ay ka mid yihiin magnesium, vitamin E, zinc iyo iron. Isticmaalka cunnooyinka ku xeel-dheer cunnada ayaa gacan ka geysanaya dayactirka nidaamka dheef-shiidka ee caafimaadka qaba kaasoo sii kicinaya guud ahaan suuqyada gobollada horumaray sida Waqooyiga Mareykanka iyo Yurub
Abuurka hemp waa isha nafaqada sare leh ee borotiinka waxaana si isdaba joog ah loogu isticmaalaa cuntooyinka baakadeysan sida baararka granola, pretzels, rootiyada iyo badarka. Suuqa cunnada ku dhisan hemp-ka ee adduunka ayaa loo qeybiyaa qeybaha borotiinka, saliidda iyo abuurka ku saleysan maaddooyinka. Kuwani, abuurka hemp horeyba u xukumay suuqa adduunka horaantii 2015 waxaana la filayaa inay sii hayaan booskooda hogaaminta muddada saadaasha. Isticmaalkooda sii kordhaya ee cunnooyinka kala duwan sida subagga lowska, jajabyada galleyda iyo baararka cunnada fudud ayaa la filayaa inay ku dhiirrigeliyaan suuqa wax soo saarka cunnada salka ku haysa inta lagu jiro muddada saadaasha.
Intaa waxaa sii dheer, abuurka hemp-ka ayaa hodan ku ah amino acids taasoo ka dhigaysa alaabadani xulasho ku habboon caafimaadka-miyir qaba iyo macaamiisha vegan Cuntooyinka hemp-ku-saleysan waxay u soo ifbaxayaan ilaha ugu dambeeya ee borotiinka ee vegans-ka sababtoo ah dheef-shiid kiimikaad ka wanaagsan borotiinnada kale ee dhirta. Marka taa laga reebo, abuurka hemp si fudud ayaa loogu dari karaa waxyaabaha lagu dubo ama lagu daro saladhyada ama maraqyada.
Cunnooyinka Hemp: 6 Faa'iidooyin La Heshay Oo Ah iniin hemp
Abuurka hemp waa miraha geedka hemp, Cannabis sativa.
Waxay ka mid yihiin noocyada dhirta sida xashiishka (marijuana) laakiin noocyo kale ah. Si kastaba ha noqotee, waxay ka kooban yihiin raadad yar oo ka mid ah THC, xarunta nafsaani-nafsiga ee marijuana.
Maalinta Khudrada Adduunka Adduunka 2020: 6da Faa'iido ee la helay ee iniinyaha hemp (afb)
Abuurka hemp waa mid nafaqo leh oo hodan ku ah dufanka caafimaadka qaba, borotiinada iyo macdano kala duwan.
Halkan waxaa ah 6 faa iidooyin caafimaad oo abuurka hemp ay sayniska taageerayaan:
Abuurka hemp waa mid nafaqo leh
Abuurka hemp wuxuu yareyn karaa halista cudurka wadnaha
Abuurka hemp iyo saliida ayaa hagaajin kara xaaladaha maqaarka
Abuurka hemp waa isha weyn ee borotiinka khudradda
Abuurka hemp wuxuu yareyn karaa astaamaha PMS iyo dayska
Abuurka hemp oo dhan wuxuu caawin karaa dheefshiidka
Suuqa cunnooyinka cuncunka adduunka ayaa ku soo kordha ku dhowaad 12% inta lagu jiro cudurka faafa ee COVID-19
Sida laga soo xigtay warbixin dhaweyd Suuqa cunnada hemp-ku-saleysan adduunka ayaa lagu wadaa inuu koro $ 2020 milyan 2024-364,98, iyadoo CAGR ay ku dhowdahay 12% saadaasha hawada. Warbixintu waxay bixisaa falanqeyn casri ah oo ku saabsan dhacdooyinka suuqa ee hadda jira, isbeddelladii ugu dambeeyay iyo darawallada, iyo jawiga guud ee suuqa. Warbixinta ayaa sidoo kale muujisay saameynta suuqa iyo fursadaha cusub ee la abuuray ee ka dhashay faafida COVID-19.
Suuqa cunnada ku dhisan ee hemp-ka waxaa hogaaminaya dadka vegan-ka ah iyo cudurada baruurta. Hab-nololeedka vegan wuxuu si xoog leh u taageeraa xuquuqda xoolaha iyo xulashooyinka hab-nololeedka bey'ada u habboon. Cunnooyinka vegan waxay ka kooban yihiin miraha, khudaarta, miraha oo dhan, digiraha, lowska iyo iniinyaha sida bedelka hilibka, waxyaabaha caanaha laga sameeyo iyo ilaha kale ee borotiinka. Wadamada sida Mareykanka, qiyaastii 2,5% dadka waxay raacaan cunno vegan iyo qaab nololeed.
Tiradan ayaa la filayaa inay kororto inta lagu jiro muddada saadaasha 2020-2024, taasoo kordhinaysa baahida loo qabo cunnooyinka hemp, sida abuurka hemp.
Waxyaabaha ugu muhiimsan:
Kobaca ugu weyn ee suuqa cuntada salka ku haya hemp-ka 2019 wuxuu ka yimid qeybta cuntada hemp-seed.
Waqooyiga Ameerika wuxuu ahaa suuqa ugu weyn ee cunnooyinka cuncunka sannadka 2019, gobolkuna wuxuu siin doonaa dhowr fursadood oo kobcin ah soo-saareyaasha muddada saadaasha.
Suuqa adduunka ee cunnooyinka salka ku haya hemp-ka ayaa kala jaban. Aurora Cannabis Inc., Shirkadda Bombay Hemp Pvt. , waa qaar ka mid ah kaqeybgalayaasha suuqa ugu weyn.
In kasta oo saamaynta ganacsi ee COVID-19 ay ku fidayso warshado badan, haddana suuqyada cunnada ee salka ku haya hemp ayaa la filayaa inay si wanaagsan u koraan sannadka 2020-2024.
Baahida loo qabo cuntooyinka dabiiciga ah ee ku salaysan hemp waxay noqon doontaa isbeddel weyn
Baahida sii kordheysa ee cunnooyinka dabiiciga ah ee ku saleysan hemp waa isbeddel ku soo kordhay warshadaha cuntada. Baahida loo qabo badeecooyinka cuntada dabiiciga ah ayaa si dhakhso leh u kordhaya
Si kastaba ha noqotee, badeecooyinka cuntada dabiiciga ah ayaa badanaa lagu qiimeeyaa kuwa caadiga ah. Qiimaha sare waxaa ugu wacan kharashyada wax soo saarka oo aad u sarreeya iyo rabitaanka macmiilku inuu bixiyo lacag dheeri ah badeecooyinka cuntada dabiiciga ah.
Iyada oo ay sii kordheyso wacyiga caafimaadka ee ku saabsan saameynta waxyeelada leh ee maaddooyinka loo isticmaalo warshadaha cuntada iyo sharaabka, baahida loo qabo wax soo saarka cuntada dabiiciga ah ayaa sii kordheysa.
Isbeddelkani wuxuu sidoo kale khuseeyaa badeecooyinka cuntada ku salaysan hemp-ka, oo hadda ciyaartoy badan ayaa iibiya cuntooyinka dabiiciga ah ee dabiiciga ah si ay ula kulmaan saldhiggan macaamiisha.
Ilo ay ka mid yihiin BusinessWire (EN), CBDOilsUK (EN), HealthLine (EN), Hogaamiyaha PRNews (EN)
caafimaad lehcaafimaadkaxagashasumadvegancuntoAdduunka oo dhan
Sidee CBD u hagaajin kartaa noloshaada galmada
Daraasad dhowaan laga sameeyay in ka badan 1.000 qof ayaa lagu ogaaday in kuwa isticmaala CBD ay ...
Xashiishadda dawada ka yar ee 2019
2019, markii ugu horreysay sanado, xashiishad yar oo dawo ah ayaa ay bixiyeen farmasiyada bulshada. Waxaa…
Faa'iidooyinka xashiishadda. Tusaale ahaan, sidee baad ugu sharraxaysaa ayeeyadii?
Daraasadaha mustaqbalka weli waa loo baahan yahay, laakiin halkan waxaa ku yaal aragtiyo waxtar leh. Sidee xashiishad casri ah maalmahan ...
NYU waxay magaalada New York ka furtay Xarun cusub oo loogu tala galay Daaweynta Cudurada Maskaxda ee ched 10 milyan